ချစ်သူကို သိန်းတစ်ရာတန် စိန်စီ ထား တဲ့နာရီ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အပေါ် ဝေဖန်ကြသူတွေကိုပြင်းပြင်ထန် ထန် တုံ့ပြန်လာခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက် – XB Media Myanmar
ချစ်သူကို သိန်းတစ်ရာတန် စိန်စီ ထား တဲ့နာရီ လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အပေါ် ဝေဖန်ကြသူတွေကိုပြင်းပြင်ထန် ထန် တုံ့ပြန်လာခဲ့တဲ့ ဇေရဲထက်
November 5, 2020 Bestie_Author
လက်ရှိမှာတော့ ဇေရဲထက်ဟာ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့ လယ်ဝေးမြို့အတွက် ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဘဝအခြေ အ နေ တွေကို ပြောပြခဲ့တာဟာ ပရိသတ်တွေ သင်ခန်းစာရစေချင်လို့၊ ဗဟုသုတ ရစေချင်တဲ့ ဆ န္ဒ ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။ ဇေရဲထက်ကို ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေကနေတ ဆ င့် ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိခဲ့တာပါ။
ရုပ်ရှင်ချောမောလွန်းတာကြောင့် လူကြီးလူငယ် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုများစွာ ရရှိခဲ့တာဖြစ် ပြီး TV ကြော်ငြာတွေလည်း အဆက်မပြတ်ရိုက်ကူးခဲ့ရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်လို့နေ ပါပြီ။
ဟန်ဆောင်မှုမရှိပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတတ်သူ ဇေရဲထက်ကတော့ ချစ်သူကို သိန်းရာကျော် တန် စိန်စီထားတဲ့ လက်ပတ်နာရီ လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အပေါ် ဝေဖန်နေကြတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြင်း ပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်လာခဲ့တာပါ
ဇေရဲထက်က. “ကိုယ်တွေကတော့ ဒဲ့ပဲ စိတ်မပါရင် သိန်းသောင်းချီလာပေးတောင် စိတ်မဝင်စား ဘူး ကိုယ်လည်း ကြည်ဖြူရင် နောက်လှည့်မကြည့်ဘူး နောင်တလည်းမရဘူး တတ်နိုင်သလော က် ပေး မယ် ပြတ်သွားလည်း ချစ်လို့ပေးခဲ့တာလေ အမှတ်တရရှိစေချင်လို့ သူဘာလုပ်လုပ် မ ကျေနပ်လို့ လွှင့်ပြစ်လည်း ကိုယ့်အလုပ်မဟုတ် ထွေးပြီးသားတွံတွေးတော့ ပြန်မငုံတတ်ဘူး” လို့ တုံ့ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ဇေရဲထက်ကတော့ သူ့ချစ်သူကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့အပေါ် ဝေဖန်နေကြသူတွေကို ပြင်းထန်စွာ တုံ့ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
လက္ရွိမွာေတာ့ ေဇရဲထက္ဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိေျမျဖစ္တဲ့ လယ္ေဝးၿမိဳ႕အတြက္ ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဘဝအေျခ အ ေန ေတြကို ေျပာျပခဲ့တာဟာ ပရိသတ္ေတြ သင္ခန္းစာရေစခ်င္လို႔၊ ဗဟုသုတ ရေစခ်င္တဲ့ ဆ ႏၵ ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သူက ေျ ပာပါတယ္။ ေဇရဲထက္ကို ဗီဒီယို ဇာတ္ကားေတြကေနတ ဆ င့္ ပရိသတ္ေတြ စတင္သိ ရွိခဲ့တာပါ။
႐ုပ္ရွင္ေခ်ာေမာလြန္းတာေၾကာင့္ လူႀကီးလူငယ္ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပး မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ ၿပီး TV ေၾကာ္ျငာေတြလည္း အဆက္မျပတ္႐ိုက္ကူးခဲ့ရ တာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အႏုပညာေလာကမွာ ပရိသတ္အခိုင္အမာနဲ႔ရပ္တ ည္ေ န တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ေန ပါၿပီ။
ဟန္ေဆာင္မႈမရွိပဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုတတ္သူ ေဇရဲထက္ကေတာ့ ခ်စ္သူကို သိန္းရာေက်ာ္ တန္ စိန္စီထားတဲ့ လက္ပတ္နာရီ လက္ေဆာင္ေပးတဲ့ အေပၚ ေဝဖ န္ေနၾကတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ျပင္း ျပင္းထန္ထန္တုံ႔ျပန္လာခဲ့တာပါ
ေဇရဲထက္က. “ကိုယ္ေတြကေတာ့ ဒဲ့ပဲ စိတ္မပါရင္ သိန္းေသာင္းခ်ီလာေပးေတာင္ စိတ္မဝင္စား ဘူး ကိုယ္လည္း ၾကည္ျဖဴရင္ ေနာက္လွည့္မၾကည့္ဘူး ေနာင္တလည္းမရဘူး တတ္ႏိုင္သေလာ က္ ေပး မယ္ ျပတ္သြားလည္း ခ်စ္လို႔ေပးခဲ့တာေလ အမွတ္တရရွိေ စခ် င္လို႔ သူဘာလုပ္လုပ္ မ ေက်နပ္လို႔ လႊင့္ျပစ္လည္း ကိုယ့္အလုပ္မဟုတ္ ေထြးၿပီး သား တြံေတြးေတာ့ ျပန္မငုံတတ္ဘူး” လို႔ တုံ႔ျပန္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္
ေဇရဲထက္ကေတာ့ သူ႔ခ်စ္သူကို လက္ေဆာင္ေပးတဲ့အေပၚ ေဝဖန္ေနၾကသူေ တြ ကို ျပင္းထန္စြာ တုံ႔ျပန္လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ အဆုံးထိဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့အ တြ က္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္
နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာ နို့ဘီလူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ ရွှေမှုံရတီ
ချစ်သူဆီကနေ သီတင်းကျွတ်လက် ဆောင်အဖြစ် တဖျက်ဖျက်တောက် ပနေတဲ့ စိန်လော့ကတ်လေးတစ်ခု လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ